ဥရောပမှာတော့ကလေးများနှင့်အတူရထားဖြင့်ခရီးသွားများအတွက်သိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့ကလေးများနှင့်အတူရထားဖြင့်ခရီးသွားများအတွက်သိကောင်းစရာများ
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 06/10/2020)
ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့်ပျော်စရာ. မိဘများပြောသည့်အခါသင်သုံးသောစကားလုံးနှစ်လုံးကိုသင်ကြားခဲသည် အားလပ်ရက်ခရီးသွား ကလေးတွေနှင့်အတူပုံပြင်များ. ဒါကြောင့်, မီးရထားဖြင့်ဥရောပမှကလေးများနှင့်ခရီးသွားခြင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်.
လေကြောင်းသို့မဟုတ်ကားခရီးသွားမယ့်လမ်းအတွက်ကလေးများ calms ကြောင့်ရထားနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုပဲရှိပါတယ်. (ကျနော်တို့ရထားခရီးသွားပိုကောင်းသည်အဘယ်ကြောင့်အပေါ်တစ်ဖွဲ့လုံးဘလော့ရေးသားခဲ့သည် အမြန်ဆုံး နှင့် ယာဉ်မောင်းထက် သာ. ကောင်း၏ သင်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချထားဖို့လိုပါလျှင်). တူညီလွန်းလူကြီးများအတွက်ဝင်! မိသားစုစားပွဲ, ဖြတ်သန်းရှုခင်းများ, ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ဖို့အခန်းတစ်ခန်း, ကဖီးအဆောက်အ, chat နှင့်အမီလိုက်ရန်အချိန်နှင့်, ပျော်ရွှင်မှု၏ဝမ်းမြောက်, အဘယ်သူမျှမအိတ်ကန့်သတ်. ရထားလမ်းအားဖြင့် Going လုံခြုံ, အဆင်ပြေခြင်းနှင့် ကြိုတင်မဲအတွက်စီစဉ်ထားသည့်အခါတတ်နိုင်. သင်၏သားသမီးများ၏ပျော်ရွှင်မှုသှနျသငျ မီးရထားခရီးသွားလာ အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေသူတို့တစ်သက်တာပြောင်းလဲဖွစျလိမျ့မညျ. အချိန်အတောအတွင်း, ဤနေရာတွင်ဥရောပ၌လေးတွေနှင့်အတူရထားခရီးသွားလာမှုအတွက်သိကောင်းစရာများများမှာ.
ဥရောပတိုက်တွင်လေးတွေနှင့်အတူရထားခရီးသွားလာမှုအတွက်သိကောင်းစရာများ: အဆိုပါကလေးများ Occupy မှလှုပ်ရှားမှုများယူခဲ့
သူ့ဟာသူအတွက်ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်ရထားကိုစီးနှင့်ပြင်ပရှိရှာဖွေနေလေးတွေထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်နေစဉ် နာရီတရားတော်, ငါတို့သည်လည်းများလွန်းအချို့လှုပ်ရှားမှုများဆောင်ခဲ့အကြံပြု. ကြိုတင်မဲအတွက်စာအုပ်နှင့်သင်အရောင်စာအုပ်တွေနဲ့မုန်ဖြန့်ဖို့ခွင့်ပြုစားပွဲတစ်ခုနှင့်အတူ window ကိုထိုင်ခုံ secure!
တက်ဘလက်: တစ်ဦးလေယာဉ်ပျံနဲ့ဆင်တူ, တက်ဘလက်အချိန်ကိုသွားမယ့်ကြီးမြတ်လမ်းနိုင်ပါတယ်. ဥရောပကမ်းလှမ်းချက်ကိုရထား၏တစ်ဦးကအများကြီး အခမဲ့ Wi-Fi ကို, ဒါပေမယ့်ဝန်ဆောင်မှုအမြဲအာမခံမထားဘူး, ဒါကြောင့်သင်သေချာအောင် ဒေါင်းလုပ်ရုပ်ရှင်တွေ နှင့်အိမ်မှာဂိမ်း. အများဆုံးရထားတွင်, နီးပါးတိုင်းတစ်ခုတည်းထိုင်ခုံရှိပါတယ် တစ်ဦးထွက်ပေါက် စွဲချက်တင်သင့်ရဲ့အီလက်ထရွန်းနစ်စောင့်ရှောက်ရန်, ဒါပေမယ့်မသက်ဆိုင်အိမ်မှာသူတို့ကိုအခကြေးငွေကောက်ခံ – နှင့်နားကြပ်ကိုရောက်စေ!
Coloring စာအုပ်များ: အရောင် စာအုပ်များ နှင့် crayons နေပါစေအဘယ်အရာကိုအသက်အရွယ်တစ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း.
အားကစားပြိုင်ပွဲ: သငျသညျစားပွဲတစ်ခုနှင့်အတူထိုင်ခုံဖမ်းပြီးနိုင်လျှင်, ကဒ်များကိုကစားရန်နေရာပဒေသာသို့မဟုတ်အခြားခရီးသွားဂိမ်းလည်းမရှိ. လေကြောင်းခရီးသွားမတူဘဲ, သငျသညျလှိုင်းလေထန်စိုးရိမ်ရန်ရှိသည်မည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်သင့်မိသားစုရဲ့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကောက်နဲ့ကစားသွားပါ. ဒါဟာအမှန်တကယ်မိုနိုပိုလီဂိမ်းတစ်ခုပြီးမြောက်ရန်စုံလင်သောအခွင့်အလမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်!
ကစားစရာ Play: သင့်ကလေး၏အသက်အရွယ်နှင့်အကျိုးစီးပွားပေါ် မူတည်., အချို့သော Matchbox ကားများသို့မဟုတ်အခြားရုပ်ဆောင်ကြဉ်း (ထင် Polly Pocket). ငါ့သားငါ့သမီးသူတို့အပျေါမှာအားပေးစရာသူမ၏နည်းနည်းရုပ်တက်သတ်မှတ်စဉ်စားပွဲတစ်ဦးအပွေးပွိုငျလမျးဖြစ်ပါတယ်ဟန်ဆောင်.
ဥရောပတိုက်တွင်လေးတွေနှင့်အတူရထားခရီးသွားလာမှုအတွက်သိကောင်းစရာများ: သည်အခြားခရီးသည်များမှထောက်ထား Be
သင်တစ်ဦးငိုသံကလေးသို့မဟုတ်ဆင်းငြိမ်သက်ဖို့အချိန်ကြာတဲ့စိတ်ဆိုးကလေးငယ်ရှိပါကလူများ၏အများစုသည်အလွန်နားလည်မှုဖြစ်လိမ့်မည်. မဟုတ် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ရှေ့ဆက်နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမရှိခြင်းကြောင့်ပျင်းသို့သင့်ရဲ့သူငယျတစျယောကျ delve အဖြစ်အများကြီးစာနာမရစေခြင်းငှါတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်. ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းများသို့မဟုတ်အငြင်းပွားမှုများကမီးပွားချရန်ဖွယ်ရှိမဟုတ်ကြောင်း Plan ကိုဖျော်ဖြေရေး. ကျနော်တို့ဥရောပမှာလေးတွေနှင့်အတူရထားခရီးသွားလာမှုအတွက်သိကောင်းစရာများရေးသားဖို့ရှိသည်ဖို့မလိုချင်ကြဘူး, သငျသညျပိုင်မ…စတာပါ!
အမြဲတမ်းတစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးအခန်းဘွတ်ကင်ဖို့ကြိုးစား အိပ်ပျော်ရထား. နေ့ချင်းညချင်းရထားကိုယူပြီးကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်, နှင့်အိပ်စက်ခြင်းရထား၏သဘာဝကျောက်မှုကြောင့်များသောအားဖြင့်ကြီးမြတ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအိပ်ပျော်သွားနှင့်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်နှိုးထလည်းဒါစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်င်. သငျသညျကိုသာသုံးဖြစ်ကြပြီးသင်နှင့်အတူတစ်လူစိမ်းခွဲဝေမှုမလိုချင်ကြပါလျှင် Sleeping အခန်းကိုသင်ဖြစ်ကောင်းထို့နောက်လိမ့်မယ်တိုင်းပြည်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားပေမယ့် ဘတ်ဂျက်ဖို့လိုအပ် သင့်ရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အခန်းပုဂ္ဂလိကစောင့်ရှောက်ဖို့ထားတဲ့အပိုအိပ်ရာကိုဝယ်ခြင်းငှါ.
ဥရောပတိုက်တွင်လေးတွေနှင့်အတူရထားခရီးသွားလာမှုအတွက်သိကောင်းစရာများ: ပယ်ရတဲ့အခါ, ကိုယ်ကိုကိုယ်အချိန်များများ Allow
အများစုကရထားမှသာတစ်ဦးချင်းစီဘူတာရုံမှာမိနစ်အများဆုံး၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်, သငျသညျရောက်လာမတိုင်မီဒီတော့ငါးမိနစ်ဝန်းကျင်သင်ဖြစ်သင့် အမှုအရာကိုတက်ထုပ်ပိုး, အိပ်ပျော်နေသောလေးတွေ rousing, အင်္ကျီပေါ်ချပြီးနှင့် overhead ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းချွတ်အိတ်ဆောင်ခဲ့. အဖွဲ့အစည်းကဒီအဆင့်ကိုသငျသညျကလေးတွေတစ်ခုသို့မဟုတ်အများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်စိတ်ငြိမ်သက်အများကြီးပေးသည် အိတ်ကို၏တွေအများကြီး. ပလက်ဖောင်းအလုပ်များသည်ဆိုပါက, သင့်ရဲ့အိတ်ပထမဦးဆုံးတံခါး၏လမ်းထဲကပယ်သွားပါသေချာ, ထို့နောက်မည်သူမဆိုပျောက်လာပြီကာကွယ်တားဆီးဖို့ထိုနောက်မှကလေးတွေခေါ်ခဲ့.
သုံးစွဲဖို့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်း ရထားအစားလေကြောင်းခရီးသွား သငျသညျညာတွန်းလှည်းသို့သင့်ရဲ့လေးတွေသိုင်းကြိုးများနှင့်ညာဘက်ရထားပေါ်သို့သူတို့ကိုလှိမ့်ချလိုက်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ဖျက်သိမ်းပြီးထို့နောက်တွန်းလှည်း reassemble မှရှိခြင်း၏ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိဘဲ. သငျသညျတစ်ခါတစ်ရံပင်ရထားပေါ်တွင်ရေစာဧရိယာသို့မဟုတ်အခြားပွင့်လင်းသောအရပ်တို့ကိုမ၌သင်တို့၏တွန်းလှည်းရပ်နိုင်ပါတယ် (ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် လက်လှမ်းဧရိယာ နေသမျှကာလပတ်လုံးကဘီးတပ်ကုလားထိုင်အတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကသိမ်းပိုက်မပြုလုပ်), သူတို့ရဲ့တွန်းလှည်း၌အိပ်ပျော်မည်သူငယ်ရွယ်ကလေးတွေကိုအဘို့အထောကျအကူပွုရသောဖြစ်ပါသည်. ငါရထားပေါ်တွင်အိပ်ဆိမ်အများကြီးပိုလွယ်တွေ့ပါကဤလေယာဉ်ပျံခရီးသွားကျော်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်.
ဥရောပတိုက်တွင်လေးတွေနှင့်အတူရထားခရီးသွားလာမှုအတွက်သိကောင်းစရာများ: အကြောင်းရောက်ရှိ 30 မိနစ်အစောပိုင်း
ကြောင်းကိစ္စများအတွက်ဥရောပ၌ဖြစ်စေဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားကမ္ဘာပေါ်မှာလေးတွေနှင့်အတူရထားခရီးသွားလာ၏အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုမှာ. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောက်လာရန်အချိန်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်! လေကြောင်းခရီးသွားမတူဘဲ, သငျသညျဝေးလွန်းရှေ့ဆက်အချိန်ရထားဘူတာရုံမှာရောက်လာရန်မလိုအပ်ပါဘူး. ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွားသည့်အခါ, ကျနော်တို့အကြောင်းကိုရောက်ရှိလာအကြံပြု 30 ကိုယ့်ကိုကိုယ်တည်ရှိပြီးဖို့အစောပိုင်းမိနစ်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်အစောပိုင်းကလျှင် ရေချိုးခန်းမှတ်တိုင်များ နှင့်သရေစာအားလပ်ချိန်အစီအစဉ်အပေါ်များမှာ. ထုံးစံအတိုင်း, အဆိုပါဘော်ဒါဖြစ်စဉ်ကိုမှီတိုငျအောငျမစတင်ပါလိမ့်မယ် 10 အများဆုံးထွက်ခွာမတိုင်မီမိနစ်, သင်မူကားတစ်ဦးမှတဆင့်အပြေးကိုယ့်ကိုကိုယ် scramble နှင့်တွေ့ပါချင်ပါဘူး အလုပ်များဘူတာရုံ.
လူအပေါင်းတို့၏ဖြစ်နိုင်သည်အရေးကြီးဆုံးအစွန်အဖျား. သွားရည်စား! ရှည်လျားသောအကွာအဝေးလမ်းကြောင်းတစ်တွေအများကြီးဆိ-ဖော်ရွေအစားအစာ၏ပဒေသာနှင့်အတူအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုထမင်းစားခန်းကားများ feature – ပြင်သစ်ကင်ထင်, ကင်ဒိန်ခဲ, Penn နှင့်အတူ meatballs. တိုတောင်းလမ်းကြောင်းများတွင်, ရထားအသားညှပ်ပေါင်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့မုအရက်ဆိုင်များ, မုန့်, ချစ်ပ်, နှင့်အခြားမုန်. သငျသညျမသက်ဆိုင်သော်လည်းသင့်ရဲ့ကလေးတွေအကြိုက်ဆုံးမုန်အချို့ထုပ်ပိုးချင်ပေမည်! တစ်ဦးမွေးကင်းစကလေးနှင့်အတူခရီးထွက်? ကလေးအစားအစာသို့မဟုတ်ဖော်မြူလာကိုယူခဲ့ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့ကနွေးဖို့အစားအစာ-service ကိုဝန်ထမ်းကိုမေး. သငျသညျသံသယဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် မကြာမီဘော်ဒါပြီးနောက်ထမင်းစားခန်းကား. ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွားသည့်အခါအမြဲအဖြစ်, သင်အမြဲမုန်နှင့်အဖျော်ယမကာဆောင်ကြဉ်းသင့်တယ်, အမှု၌သင်တို့ကိုကြိုတင်မှာယူမှုမရနိုငျပါသို့မဟုတ်ရေစာ bar ကိုသင့်ရဲ့ကလေးတွေသူတို့ငတ်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာမယ့်အခါ, ပိတ်ပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်.
ယခုသင်ကလေးတွေနှင့်အတူရထားခရီးသွားဘို့ငါတို့သိကောင်းစရာများနှင့်အတူလက်နက်ပါနေသောကလေးတွေနှင့်အတူရထားခရီးစဉ် Brave ဖို့အဆင်သင့်? ကြီးမားသော! သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူနှင့်အတူ တစ်ဦးကရထား Save, လုပ်ရတဲ့-အခမဲ့!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-travelingy-train-kids-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)